श्री एयरलाइन्सले थाल्यो उडान, सुरुवातमै रोज्यो ५ गन्तब्य  OnlineKhabar
आइतबार, ५ कार्तिक, २०७४
श्री एयरलाइन्सले थाल्यो उडान, सुरुवातमै रोज्यो ५ गन्तब्य
२७ साउन, काठमाडौं । ४ महिनाको अड्चनपछि उडान अनुमति (एओसी) पाएको श्री एयरलाइन्सले शुक्रबारदेखि नियमित उडान थालेको छ । उडानको पहिलो दिन यसले देशका तीन स्थानमा उडान भर्‍यो ।
श्री एयरलाइन्सका बजार प्रबन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार शुक्रबार एयरलाइन्सले भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी उडान भरेको हो । शनिबारदेखि भद्रपुर र आइतबारदेखि बिराटनगरको उडान भर्ने उनले जानकारी दिए ।
मानन्धरले भने, ‘अहिले ५ स्थानमा उडान भर्ने तय भइसकेको छ, माउन्टेन फ्लाइट पनि सुरु गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।’
विमान ल्याएको झण्डै ४ महिनापछि बिहिबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सलाई एओसी दिएको थियो ।
यसले अहिलेसम्म तीनवटा जहाज ल्याइसकेको छ । श्री एयरलाइन्सले पहिलो विमान गत चैतमा नै किनेको थियो । यसले तीन महिनामा क्यानाडाको बम्बार्डियरबाट उत्पादित सिआरजे सिरिजका तीनवटा जेट इन्जिनयुक्त विमान भित्र्याएको थियो ।
एयरलाइन्सले चार महिना अघिदेखि उडान थाल्न खोजेको भए पनि प्राधिकरणले एओसी दिनमा गरेको ढिलाइका कारण उडान भर्न सकेको थिएन । नियमित उडान गर्नुपर्ने जहाज ग्राउण्डेड भएर बसिरहादा कम्पनीले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ ।
तीन महिना बित्दासम्म पनि पनि क्यानले कुनै निर्णय नदिएपछि श्रीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले तानेको थियो ।
अख्तियारले छानबिन गर्न थालेपछि मात्रै प्राधिकरणले एओसीको प्रक्रिया थालेको थियो । एओसी जारी गर्नुभन्दा पहिले उडान परिक्षण गर्ने अनुमति पनि क्यानले केहि दिनअघि मात्रै दिएको थियो ।
श्री एयरलाइन्सले उडान थालेसागै नेपालको आन्तरिक उडान थप प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ । यसअघि श्री एयरलाइन्सले उडान नथाल्दै मंगलबार र शनिबार यात्रु कम भएको देखिएको थियो । यसले उडान थालेपछि झनै प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि अहिले बिमान कम्पनीहरुले बेलाबेलामा भाडा घटाउने गरेका छन् । यसरी आन्तरिक प्रतिस्पधाृ बढेपछि यात्रुलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
२०७४ साउन २७ गते १८:४७ मा प्रकाशित
नेपाल र जोर्डनबीच श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समिति बन्ने
भूकम्पपीडितले घर बनाउने क्रम बढ्यो
सोल्टीले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
राष्ट्रसंघबाट राजीनामा दिएर स्वदेश फर्किंदै रमेश खरेल
Rama Kant Gauro लेख्नुहुन्छ | २०७४ साउन २८ गते ८:१२
Kindly include SIMRA in your programme also. Thanks.
प्रदेशसभाका ७४ सिटमा डेढ सय प्रतिस्पर्धी (पूर्णविवरण)
पोखरामा नालीमा बगेर एकजना बेपत्ता
हरियो पहिरनमा कती राम्री सगुन ?
बेनिशाको काँधमा सौगात
जब गुगल सर्चमा टाइप गर्दा हिज्जे फरक पर्यो, अनि भेटिए यस्ता अनौठा तस्वीर
जब भालुको बथानले पूरै गाउँलाई बन्धक बनायो